सक्षम जनशक्ति निर्माणमा त्रिविको भूमिका महत्वपूर्णःप्रधानमन्त्री
काठमाडौ १६,पुुस प्रधानमन्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाले देशको समग्र विकासका लागि आवश्यक पर्ने सक्षम जनशक्ति तयार पार्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ४३ औँ दीक्षान्त समारोहलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले
त्रिवि दीक्षान्त पुस १६ गते हुने, ८ हजार विद्यार्थी दीक्षित हुने
काठमाडौं २, पुस । त्रिभुवन विद्यालयले यस वर्ष पुस १६ गते दीक्षान्त समारोह आयोजना गर्ने भएको छ । त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार ८ हजार दीक्षित हुने विद्यार्थीको ग्रेस लिष्ट तयार भइसकेको छ । यसपालीको समारोह ललितपुरको पुल्चोक क्याम्पसका आयोजना हुने त्रिविले बताएको छ ।
पुतली सडकमा खुल्यो एडुकेशन एन्ड भिजा कन्सलटेन्ट
काठमाडौं १३,मंसिर । अमेरिका, अष्ट्रेलिया र जापान पढन जाने विद्यार्थीलाई उचित परामर्श र मार्ग निर्देश गर्ने उद्देश्यले काठमाडौंको पुतली सडकमा एडुकेशन एन्ड भिजा कन्सलटेन्ट केन्द्र खुलेको छ । कन्सलटेन्ट केन्द्र बुधबारबाट औपचारिक ?पमा सञ्चालनमा आएको छ । पछिल्लो समय विदेश पढन जाने क्रेज बनाएका युवा÷युवतीलाई
व्यस्तताका कारण पढ्न नभ्याएकाहरुलाई सुनौलो अवसर, दुरशिक्षाबाट यसरी पढ्न सकिन्छ
काठमाडौँ । के तपाईले समय व्यस्तताका कारण पढ्न पाउनु भएन । अथवा सानै उमेरमा पेशा वा राजनितिका कारण पढ्नबाट बच्चित हुनुभयो । त्यस्तो हो भने तपाई अब पनि व्याचलर, माष्टर डिग्री र एमफिल गर्न सक्नुहुनेछ । काठमाडौँको कोटेश्वरमा रहेको सिटी एजुकेशन फाउन्डेसनबाट तपाईले घरमै पढेरपनि माष्टर डिग्री र एमफिल गर्न सक्नु
धरासायी विश्वविद्यालय: त्रिविमा जागिर, अन्यत्रै काम
काठमाडौं- काठमाडौंको गोल्डेन गेट इन्टरनेशनल कलेजको वेबसाइट खोल्नेवित्तिकै क्याम्पसका सीईओ रमेश सिलवालको स्वागत मन्तव्य (वेलकम नोट) पढ्न पाइन्छ। त्यहाँ उनले लेखेका छन्, “हाम्रो क्याम्पस (गोल्डेन गेट कलेज) को मुख्य उद्देश्य राम्रो शिक्षा र सोचको विकास गर्दै दक्ष विद्यार्थी उत्पादन गर्नु हो।” आफ्नो
एमबीबीएसको पुनः प्रवेश परीक्षा १६ मंसिरमा हुने (सूचनासहित)
काठमाडौं ४, मंसिर । त्रिवि चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले रद्ध गरेको एमबीबीएस प्रवेश परीक्षा आगामी १६ मंसिरमा लिने निर्णय गरेको छ । आइओएम परीक्षा समितिका अनुसार आगामी १६ मंसिरका दिन शनिबार एमबीबीएसको प्रवेश परीक्षा लिने निर्णय गरेको हो । परीक्षा समिति संयोजक एवं सहायक डीन प्राडा राजेन्द्र
डा. केसी १२ औं पटक अनसनमा
काठमाडौँ, ९ असोज । त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका प्रा.डा. गोविन्द केसीले पाँच सूत्रीय माग राखी १२ औं पटक अनशन शुरु गरेको छ । महाराजगञ्जस्थित सो संस्थाको हाताभित्र पत्रकार सम्मेलन गरी डा।केसीले आफ्नो १२ औँ अनशन सोमबारबाट शुरु गरेको घोषणा गरेका हुन् । सरकारले आजै व्यवस्थापिका–संसद्बाट
शिक्षामन्त्री वहिष्कार गर्ने ९ विद्यार्थी संगठनको निर्णय
काठमाडौं २६, असोज, । नेपाल विद्यार्थी संघ बाहेकका ९ विद्यार्थी संगठनहले शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठलाई सार्वजनिक बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेका छन् । उनीहरुले शिक्षा ऐन संशोधनमा सरोकार पक्षको मागको वेवास्था गरेको भन्दै विधेयक प्रमाणिकरण नगर्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय
अमरवाणी संवाददाता/ काठमाडौं । पत्रकार दामोदर न्यौपानेको चौंथो कृति ‘स्वर्णिम समय’ विमोचन गरिएको छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा कृतिको साहित्यकार माया ठकुरी, राजनीतिज्ञ नयनबहादुर स्वाँर, समालोचक कृष्णप्रसाद गौतम, वरिष्ठ पत्रकार हरिहर विरही र अञ्जु भट्टराईले विमोचन गरे । कृति ईटर्नन पब्लिकेशनले